Ntugharị njem nlegharị anya nke Italy: Olile anya Mgbasa Ọrịa Na-efe efe |
Home » Akụkọ ndị ọbịa nke mba ụwa » Italy njem ozi ọma » Mgbasa njem Italytali nke Italy: Olileanya Na-abịa Ọrịa Pụrụ Iche
Consortium ndị njem nlegharị anya nke Maratea na mpaghara Basilicata nke dị na ndịda Italy bụ ndị ikike ime obodo na ndị omeiwu sitere na Lucanian, yana ndị nta akụkọ mba na mba, na Mịnịsta nke njem nlegharị anya Massimo Garavaglia. Ha niile zutere na Hotel Villa del Mare iji gosipụta usoro ihe omume maka oge ndị njem na njem nlegharị anya nke Italy nke njem maka afọ 2021.
Ọrịa na-efe efe, njem nlegharị anya nke njem nlegharị anya nke Italy nke ebe ndị njem ya na ọrụ mmepe malitere maka afọ fọdụrụ nke afọ a.
Site na tali na mpaghara ọcha, njem nwere ike ịmaliteghachi karịa ka a tụrụ anya na mbụ.
Iwebata Green Pass ga-emekwa ka njem a na-eme njem.
“Njem nleta na willtali ga-amalite n'isi ụtụtụ, na-atụnye ụtụ maka nhazigharị akụ na ụba. Ha haziri obodo Maratea n'akụkụ ọ bụla nke teknụzụ na nnabata iji nabata njem nlegharị anya nke ga-alọghachi n'oge na-adịghị anya n'ihi ọgba aghara ọrịa nke Italy na mpaghara ọcha ma webata Green Pass, "onye ozi njem njem na Italy Massimo Garavaglia kwuru.
Njem Nleta na Basilicata: Nde 4.5 iji weghachi
PARTI bu okwu achoputara na "Action Plan to Recover Tourism in Basilicata. ” Atụmatụ a ruru nde euro 4.5 ma tinyekwa atụmatụ maka ngwa ngwa nke mmemme iji gbakee nsogbu ndị njem. Okwesiri iji meziwanye onyinye nke ala ma wusi ike nke ebe Basilicata na ahia mba na nke uwa.
Atụmatụ nke onye ndụmọdụ mpaghara mpaghara maka Mmepụta Mmepụta gosipụtara, Francesco Cuffaro, na-ezube imelite onyinye ahụ na ọrụ mkpokọta gụnyere ịmepụta netwọkụ nke ndị na-arụ ọrụ n'ọhịa nka, agbamakwụkwọ, okomoko, ezinụlọ, n'èzí, ebe mmiri na ugwu, ebe nkiri. , ebe obibi, na ihe omume, yana ngalaba ọhụụ.
Ndị Omeiwu na-akwado ịmalitegharị njem nlegharị anya nke Italytali.
Aro nke ndị Omeiwu
Ntughari nke Senator Lomuti na-elekwasị anya na nkwado nke SMEs [ụlọ ọrụ obere na ọkara] na mgbakwunye na atụmatụ iji dọta njem nleta na obodo Maratea, gbasaa na mpaghara Basilicata. Iji gosipụta njirimara nke ihe eji arụ ọrụ, ọfụma ile ọbịa nke Maratea na-enye yana ịma mma nke mpaghara Basilicata ga-adị na ya.